RASMI: Barcelona Oo Dib Ula Soo Wareegtay Xidigeedii Hore Ee Gerard Deulofeu Iyada Oo Dhaqan Galisay Qodob Ugu Jiray Heshiiskii Uu Everton Ugu Biiray. – WWW.Gool24.net
RASMI: Barcelona Oo Dib Ula Soo Wareegtay Xidigeedii Hore Ee Gerard Deulofeu Iyada Oo Dhaqan Galisay Qodob Ugu Jiray Heshiiskii Uu Everton Ugu Biiray.
30/06/2017 Mahamoud Batalaale
Kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dib ula soo wareegtay xidigii hore ee kooxdeeda ee Gerard Deulofeu waxayna Barcelona dhaqan galisay qodob ay ku darsatay heshiiskii uu Gerard Deulofeu ugu biiray kooxda Everton. Gerard Deulofeu ayaa xili ciyaareedkii dhamaaday waqti fiican ku soo qaatay kooxda AC Milan oo uu heshiis amaah ah ugu joogay.
Barcelona ayaa haysatay ugu danbayn maanta oo ah jimce ee June 30 si ay u dhaqan galiso qodobkii ugu jiray heshiiska Gerard Deulofeu kaas oo xaq u siinayay in ay dib ula soo wareegi karto.Gerard Deulofeu oo hadda ku maqan waajibaadka xulka qarankiisa Spain ayaa dib ugu soo laaban doona Camp Nou wuxuuna saxiix doonaa heshiis laba sano ah.
Kooxaha Juventus iyo AC Milan ayaa doonayay in ay Gerard Deulofeu kala soo wareegaan Everton balse Barcelona ayaa saacado ka hor waqtigii uu dhaci lahaa qodobkani waxay ku dhawaaqday in ay Gerard Deulofeu kala soo wareegtay Everton.
Qoraal rasmi ah oo kooxda Barcelona ka soo baxay ayaa lagu xaqiijiyay heshiiska Gerard Deulofeu waxaana lagu yidhi: ” Kooxda kubbada cagta Barcelona waxay dhaqan galisay qodobkii ay dib ugu soo iibsan kartay Gerard Deulofeu. Maalmaha soo socda qodobada ayaa lagala heshiin doonaa Everton iyo ciyaartoyga. Heshiiska Gerard Deulofeu waxa uu dhici doonaa July 30,2019″.
Barcelona ayaa saxiixa Gerard Deulofeu ka soo bixinaysa 12 milyan oo euros waana lacagtii ay Everton hore ugula heshiisay in ay da’yarkan dib ugu soo ceshan karto iyada oo haddii ay barri gaadhi lahayd aan xidigan xaq ugu yeelateen in ay lacag intan leeg kula wareegto.
Gerard Deulofeu ayaa dib ugu laaban doona goobtii uu xirfada kubbada cagta ka soo bilaabay ee Barcelona balse iyada oo Barcelona suuqa ugu jirta saxiixyo muhiim ah ayaan la ogahayn in uu fursad ka heli doono weerarka Camp Nou balse ugu horayn Barcelona ayaa doonaysay in ay ka faa’iidaysato fursada ay Gerard Deulofeu ugu heli kartay 12 milyan oo eruos oo kaliya.